Udiyaar garowga Bisha Ramadaan oo ka socda Magaalooyinka Dalka – SBC
Udiyaar garowga Bisha Ramadaan oo ka socda Magaalooyinka Dalka
Guud ahaan Magaalooyinka waaweyn ee dalka Soomaaliya waxaa ka jira diyaar garow baahsan oo ay bulshada ugu diyaar garoobayaan bisha barakeysan ee Ramadaan oo bilandoonta maalmo un ka dib.
Waxaa mauuqanaya qeybaha kala duwan ee bulshada oo ku qul qulaya qeybaha kala duwan ee suuqyada iyagoona iibsanaya waxyaabaha ramadaanka loogu talagalay sida Timirta oo lagu afuro iyo weliba waxyaabaha quutul daruuriga ah.
Magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hoose waxa ay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee dalka oo ay ka socdaan diyaar garowga waxaana ka muuqanaya qeybaha kala duwan ee bulshada oo ku qul qulaya goobaha ganacsiga, iyadoona culimada iyo wax garadka ay ka hadlanayaan masjidyada magaaladaas iyagoo bulshada u sheegaya fadliga bishani ay leedahay iyo sida ay ugu weyntahay Diinteena Islaamka.
Sidookale magaalooyinka waaweyn ee gobolada Bariga, Waqooyiga iyo Konfurta dalka ayay ka soconayaan dhaqdhaqaaqyadan u diyaar garowga Bisha Ramadaan,
Magaalada Boosaaso Xarunta gobolka Bari ayay sidoo kale ka jiraan dhaq dhaqaaqyada u diyaar garowga, waxaana jira in bulshaweynta ay muujinayaan caawimaada dadka walaalahood ah ee ay abaartu ku heyso gobolo ku yaala koonfurta dalka, iyagoona ay ku boorinayaan qeybaha kala duwan ee Culimada iyo Waxgaradka in la gar gaaro dadka Soomaaliyeed.
Waxaa xusid mudan sidoo kale in magaalooyinka oo dhan ay ka jiraan, Barnaamijyo ka baxa idaacada ku yaala magaalooyinkaas oo ku aadan Tartamo Aqooneed oo la qabto bisha ramadaan kaas oo ay dadka si aad ah u xiiseeyaan,
Waxaa ka mid ah Idaacadaha iyo Warbaahinada qabta Barnaamijyadan Idaacada SBC International oo iyadu Tartan u qabata Tartan aqooneed Xaafada ku yaala guud ahaan magaalooyinka Puntland, waana Barnaamij Aad loo xiiseeyo, kaas oo iminka ay soconeyso u diyaar garowgiisa.
Isku soo wada duub Bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa ah bil ku weyn Diinta Islaamka Faralna ku ah qofwalba oo Muslin ah in uu Sodonka Maamlin ee Bishaasi uu Alle dartiis ugaga soomo waxyaabaha uu cuno.